Abahlinzeki be-Power Drawer & Factory - Abakhiqizi be-China Power Drawer
Inhlanganisela Power connec ...
Module Power Isixhumi DC50 & DC150
Izixhumi zemoto kagesi zezimboni-DC50
Ukuqondisa ukwakheka kokuxhumeka ngamandla we-crimping aphansi futhi athambile
Ukumelana nokuxhumana okuphansi kanye namandla aphezulu wokuqhuba wamanje
Ukudlidliza okulwa namandla omthelela omubi
I-Smooth arc contact surface nokuthembeka okuphezulu kokuxhumana okunamandla
Ukwahlukanisa okuphezulu, ukumelana nokuphakama kokushisa okuphezulu
Modular, isixhumi esiguquguqukayo
Ukwakhiwa kwesakhiwo kwentwasahlobo okuthuthukile, ukuthembeka okuphezulu kokuxhumana okunamandla
Okuvamile okusetshenziswa embonini
Module Power Isixhumi DCL
Isixhumi seDCL-1 ngumkhiqizo okhethekile wesixhumi esibonakalayo samandla, ongashintshana ngokuphelele nemikhiqizo efanayo embonini efanayo.
Lo mkhiqizo usebenzisa ukwakheka kokuntanta okuntantayo, okungasetshenziswa ku-plug eyimpumputhe kusixhumi esibonakalayo samandla. Ukukhethwa kokuthintwa komkhiqizo webhande lomkhiqizo yi-elasticity ephezulu namandla we-beryllium bronze. Ngokusebenzisa isakhiwo somhlanga, sinezici zobuso obushelelezi bokuxhumana nokunwebeka, akukho monakalo ebusweni bensimbi yokufaka, futhi indawo ephezulu yokuxhumana ingaqinisekiswa. Ngakho-ke, isixhumi esisebenzisa umhlanga sinokuphikisana kokuxhumana okuphansi, ukukhuphuka kwezinga lokushisa okuphansi, namandla okuthwala okuzamazama komhlaba aphezulu, ngakho-ke umkhiqizo osebenzisa isakhiwo somhlanga unokwethenjelwa okukhulu kokuxhumana okunamandla.
Module Power Isixhumi TJ38
Isifinyezo: Isixhumi se-module yokunikezwa kwamandla ye-TJ38-1 inezici zokuxhuma okuthembekile, ipulagi ethambile, ukumelana koxhumana naye ongaphakeme, ukusebenza okuphezulu okulayishwa ngokusebenza kwamanje nokusebenza okuhle kakhulu. Ipulasitiki yalesi sixhumi se-module senziwe nge-UL94 v-0 ebangeni elihle kakhulu lezinto ezingangeni umlilo. Umhlanga wengxenye oxhumana nayo wenziwe ukuqina okuphezulu namandla amakhulu we-beryllium zethusi futhi uhlanganiswe nesiliva, okuqinisekisa ukuthembeka okuphezulu kokuxhumana komkhiqizo.
Faka esikhundleni se-Amphenol / Amphenol PT Power Connectors
Faka esikhundleni sezixhumi zamandla ze-TE ET (ELCON)
Miselela iTe 2042274-1 Ngokuxhumana Nekhowudi
Miselela i-Te 2042274-2 Ngaphandle koxhumana nabo bokufaka amakhodi
1. Kufike kuma-35Amps oxhumana naye ngamunye
2. Ukuqina kokuphela kokuphela
3. Iphrofayili ephansi, ngaphansi kuka-8 mm ngaphezu kwe-PCB
5. Positive latch ukugcinwa
6. I-engeli engakwesokudla nezintaba eziqondile
1. Working 35A yamanje, iyatholakala ocingweni lokuxhuma ibhodi.
2. Isokhethi lisetshenziselwa ukuchelela i-PCB engaphansi ngo-8mm.
3. The direction of welding = mpo futhi enezingqimba
5. Ingelosi yokufakwa = mpo futhi ivundlile
6. Ivumelana nenqubo yokufaka i-lead-free soldering, kuze kufike ekuzungezeni nge-soldering 265 ° C,
7. Hlangana ne-ELV ne-RoHS ejwayelekile
8.Ukuhambisana ne-ET Power Connectors:
A. Ingxenye cha. : 1982299-1, 1982299-2, 1982299-3, 1982299-4, 1982299-6,2178186-3, 2204534-1, 2173200-2, 2178186-3,
B. Ingxenye No yesokhethi elingu-90 °: 1982295-1, 1982295-2,
C. Ingxenye Cha yesokhethi engu-180 °: 2042274-1, 2042274-2,
Ukuhambisana nesixhumi se-Amphenol PT Power: C-PWR-MRA0-01, PWR-FST0-02, PWR-FST0-01, PWR-MRA0-01, C-PWR-FST2-01 ；
E. ukufaka esikhundleni ngokuphelele: INokia part no.: RPV 447 22/001 / RPV 447 22/501.
Module Power Isixhumi DJL150
Isixhumi se-module ye-DJL150 yezimboni inezici zokuxhuma okuthembekile, ukudayela okuthambile, ukumelana koxhumana naye ongaphakeme, ukusebenza kwamanje okuphezulu, ukusebenza okuhle kakhulu, njll, futhi kudlule isitifiketi sokuphepha se-UL (E319259), lolu chungechunge lwemikhiqizo lisebenzisa ubuchwepheshe obuphambili be umqhele we-rotary hyperbolic spring jack njengoxhumana naye, ngakho-ke unokwethenjelwa okuphezulu kokuxhumana okunamandla.
Module Power Isixhumi DJL125
Isixhumi se-module ye-DJL125 yezimboni inezici zokuxhuma okuthembekile, ukudayela okuthambile, ukumelana koxhumana naye ongaphakeme, ukusebenza okugcwele okulayishwa, ukusebenza okuhle kakhulu, njll, futhi kudlule isitifiketi sokuphepha se-UL (E319259), lolu chungechunge lwemikhiqizo lisebenzisa ubuchwepheshe obuphambili be- umqhele we-rotary hyperbolic spring jack njengoxhumana naye, ngakho-ke unokwethenjelwa okuphezulu kokuxhumana okunamandla.
Module Power Isixhumi DJL75
Isixhumi se-module ye-DJL75 sinezici zokuxhuma okuthembekile, ukudayela okuthambile, ukumelana koxhumana naye okuphansi, ukusebenza okuphezulu kokulayisha okwamanje nokusebenza okuhle kakhulu.
Isixhumi salesi sigaba sisebenzisa ubuchwepheshe obuthuthukisiwe be-single rotary emaceleni amabili entambo yasentwasahlobo jack nomqhele wejack spring njengezingxenye zokuxhumana, ukuze umkhiqizo ube nokuthembeka okuphezulu koxhumana naye.
Module Power Isixhumi DJL38
Imikhiqizo ekhethekile ye-DJL series connector module supply product products, and peer in the same products interchangeable, futhi ngo-2011 kudlule isitifiketi sokuphepha se-UL (E319259) lolu chungechunge lwemikhiqizo lwamukela ubuchwepheshe obuphambili be-hyperboloid yelinye ishidi lohlobo lwentambo yomgodi wentwasahlobo nomgodi wejack oxhumana naye, ngakho-ke umkhiqizo unokwethenjelwa okuphezulu kokuxhumana okunamandla.
Module Power Isixhumi DJL37
Module Power Isixhumi DJL29
Module Power Isixhumi DJL26
Module Power Isixhumi DJL25
Module Power Isixhumi DJL18
Isixhumi se-ELCON hi ekhabetheni lamanje silinganise amandla wokusebenzisa amandla wesiginali we-35Amp wamanje18pins DJL18
Amandla ka-Anen abelokhu ekhiqiza isixhumi samanje samanje esisheshayo kusukela ngo-2006. Amandla nesiginali zombili zihlangana kwesinye.
Ngamasokhethi entwasahlobo wekhwalithi ephezulu nezikhonkwane zesiliva ezifakiwe. Iqinisekisa ukuthembeka kokuxhumana.
Ukufakwa nokususwa okuthambile,
Amandla wokufaka aphansi,
Okuphansi contact ukumelana,
Ukusebenza okuphezulu kwamanje nokusebenza okuhle kakhulu.